ပဲပွုတျလေးနဲ့နစေ့ဥျလှူပွီး နတျပွညျမှာဗိမာနျရှိပွီးသားဖွဈနတေဲ့ အဖှား - Channel Lover
ခဈြပရိသတျကွီးရေ ယခုပွောပွပေးမယျ့ အကွောငျးအရာလေးကတော့ အရမျးကိုမှ ထူးခွားပွီး အံ့သွဖှယျကောငျးလှတဲ့ အဖှားတဈယောကျရဲ့ ကုသိုလျထူး အကွောငျးလေးပါ။ ဒီအကွောငျးရငျးရဲ့ အစမှာတော့ ပဲခူးတိုငျး ညောငျလေးပငျမွို့ရဲ့ ဆေးရုံပျေါမှာ
သကျတျော( ၈၉ )နှဈရှိပွီဖွဈတဲ့ ဆရာတျောကွီး ဦးဇာဂရဟာ နာမကနျြးဖွဈလို့ ဆေးရုံကွီးမှာ ဆေးကုသမှု ခံယူရာ ကနေ တဈနေ့ မှာတော့ သတိလဈမမွေ့ော သှားခဲ့ပါတော့တယျ ။ ဒါနဲ့ပဲ ဆရာတျောဟာ အိမျမကျမကျသလို ဖွဈနပွေီး “အငျး ငါ ဘယျကိုမြား ရောကျနတောပါလိမျ့ ။
ဧကန်တ ငါအခု နတျပွညျကို ရောကျနတေယျ ထငျပါရဲ့ဆိုပွီး ။” သူ့ဗိမာနျနဲ့သူ စောငျးငွှငျး ပတျသာ တူရိယာတှေ ကခုနျ တီးမှုတျ နလေိုကျကွတာ။ ဒါနဲ့ပဲ ဆရာတျောဟာ ဗိမာနျကွီးတဈခု တှသှေ့ားခဲ့တယျ။ ဟော ဒီ ဗိမာနျကွီးကလညျး ရှရေောငျတှေ တလကျလကျနဲ့ ဝငျးထိနျနပေါရောလား။
နတျပွညျဆိုတော့ အမှေးနံ့သာမြား မှေးကွိုကျလကျြ ရှိပွီး နတျသမီးတှကေလညျး အပွညျ့ရှိလို့ နပေါတယျ ။ ဘယျလို ကုသိုလျကောငျးမှုတှေ ကွောငျ့မြားပါလိမျ့ ငါ မေးမွနျးကွညျ့ဦးမှပါပဲ ဆိုပွီး သှားရောကျမေးမွနျးခဲ့ပါတယျ ။အို အသငျ နတျသမီးတို့
ဤကွီးမားတဲ့ ဗိမာနျပိုငျရှငျကား မညျသူဖွဈပါသလဲ ? ” မှနျလှပါဘုရား ဗိမာနျပိုငျရှငျက ယခု ရောကျမလာသေးပါ။ လူ့ပွညျမှာပဲ သကျရှိထငျရှား ရှိနဆေဲပါဘုရား။ သကျတျောပွညျ့လို့ နစေ့ကေံ့ကုနျတဲ့အခြိနျမှ ရောကျလာမှာဖွဈတဲ့အတှကျ တပညျ့တျောမတို့လညျး အလှနျပငျြးလှပါသညျဘုရား။
အရှငျဘုရား လူ့ပွညျပွနျရောကျတဲ့အခါ ဤဗိမာနျပိုငျရှငျကို တပညျ့တျောမတို့ စောငျ့မြှျောနကွေောငျး ပွောကွားပေးတျောမူပါဘုရား ” ဆိုပွီး နတျသမီးတို့ဟာ ဆရာတျောဘုရားကို လြှောကျတျောမူလိုကျတယျ။ ဒါနဲ့ပဲ ဆရာတျောဘုရားက ” ကောငျးပါပွီ ဒကာမတို့။ ဗိမာနျပိုငျရှငျကို ဆရာတျော ပွောကွားပေးပါ့မယျ။
ဤဗိမာနျပိုငျရှငျရဲ့ အမညျနာမနဲ့ နထေိုငျရာနရေပျဒသေကိုသာလြှောကျထားပါလေ ” ဆိုပွီး မိနျ့တျောမူလိုကျတယျ။ ” မှနျလှပါ ဘုရား ပဲခူးတိုငျး ဖွူးမွို့နယျ ဝဲကွီးအောကျခုံရှာက ဒျေါကုလားမပါ ဘုရား ” ဆိုပွီး လြှောကျလိုကျခြိနျမှာပဲ ဟော ဆရာတျောကွီး သတိရလာပွီဟေ့ ဆိုပွီး
ဆေးရုံက ဦးပဉဇြငွးတို့က ပှောလွကှရွှိနခှေိနမွှာပဲ ဆရာတောဘွုရား က မောငပွဉဇြငွးတို့ ငါပှောတာကို စာရှကနွဲ့ သခှော လိုကရွေးထားစမွးကှဲ့ ဆိုပှီး နတသွမီးတှေ ပှောပှလိုကတွဲ့ လိပစွာကို ပှောပှလိုကတွယွ ။ ဆရာတောဘွုရား ကနွှးမာရေးအခှအနေေ ပှနကွောငွးလာတဲ့အတှကကွှောငွ့
ဆေးရုံကနေ ဆငျးပွီးတဲ့အခါမှာ သူမှတျထားခိုငျးတဲ့ လိပျစာအတိုငျး ရဟနျးတျော နှဈပါးကို ဗိမာနျပိုငျရှငျဆီကို စလှေတျလိုကျပွီး နတျသမီးတှမှောကွားတဲ့အတိုငျး ပွောပွခိုငျးပွီး” ဘာကွောငျ့ မသခေငျမှာပဲ နတျပွညျမှာ ဗိမာနျပေါကျတဲ့ အထိဘယျလိုထူးခွားကောငျးမှနျတဲ့
ကုသိုလျကောငျးမှုတှမြေား ပွုလုပျသလဲလို့ သခြောမေးမွနျး စုံစမျးခဲ့ပါ ” ဆိုပွီး ခိုငျးလိုကျခဲ့ပါတော့တယျ ။ ဒီဝဲကွီးအောကျခုံရှာမှာက ဒျေါကုလားမကို မသိတဲ့လူ မရှိကွ ပေ။ ဒျေါကုလားမက မုဆိုးမတဈယောကျပါ။ သမီးလေးတဈယောကျနဲ့ အတူနထေိုငျပွီး ပဲပွုတျရောငျးစားပါတယျတဲ့။
ဒါနဲ့ပဲ ရဟနျးတျောနှဈပါးဟာ ယိုငျနဲ့နဲ့ တဲလေးထဲဝငျသှားပွီး ဒျေါကုလားမနဲ့တှတေဲ့အခါ ဆရာတျောဘုရား မိနျ့ကွားလိုကျတဲ့အတိုငျးအကြိုးအကွောငျး အစုံအလငျကို ပွောပွပွီး ဒျေါကုလားမရဲ့ ကုသိုလျကောငျးမှုထူးတှကေို စတငျပွီး မေးမွနျးကွပါတော့တယျ ။
အရှငျဘုရားတို့ တပညျ့တျောမက အလှနျဆငျးရဲပါတယျဘုရား။ သူမြားတှလေိုလညျး ထောငျသောငျးခြီပွီး မလှူဒါနျးနိုငျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ မနကျအာရုဏျတဈကွိမျ နဲ့ နဆှေ့မျးတဈကွိမျကိုတော့ ဘုရားရှငျကို ဆှမျးကပျ လှူဒါနျးပါတယျဘုရား။ သွျော အဲ့လိုလား။
ဒါနဲ့ ဒကာမကွီးရဲ့ဘုရားရှငျအား ဆှမျးကပျလှူဒါနျးပုံကို ဦးဇငျးတို့ သိပါရစေ ဒကာမကွီး။ တငျပါ့ဘုရား။ ဆှမျးကပျလှူဒါနျးပုံကတော့ တပညျ့တျောမ မနကျ အာရုဏျတကျတာနဲ့ အသငျ့ခကျြပွီးသား ဆှမျးကို စားပှဲခုံနဲ့ သခြောပွငျဆငျပါတယျ ဘုရား။
လကျဆေးတျောရနေဲ့ သောကျတျောရေ လကျသုပျပုဝါတှကေိုလညျး အပွညျ့အစုံတငျပွီး သကျတျောထငျရှားရှိတဲ့ ဘုရားရှငျကိုယျတိုငျ ကွှရောကျဘုနျးပေးနသေလိုမြိုး အာရုံပွုပွီး ဒါက လကျဆေးတျောပါ ဘုရား ဒါက သောကျတျောရပေါ ဘုရားလို့ လြှောကျထား ဆကျကပျပွီး အနားကနေ ယပျခတျပွီး လှူဒါနျးပါတယျ ဘုရား။
သူမြားတှလေို တပညျ့တျောမလညျး အသား ငါးနဲ့ သခြောခကျြပွုတျပွီး လှူဒါနျးခငျြပမေယျ့ တပညျ့တျောမတို့ အခွအေနနေဲ့ မတတျနိုငျတဲ့အတှကျ နစေ့ဉျ ပဲပွုတျနဲ့သာ လှူဒါနျးနိုငျပါတယျဘုရား ။တခါတလတေော့ ဈေးရောငျးပွီးပွနျလာတဲ့အခါ ငနုပျငဖှဲလေးမြားကို ဝယျလာပွီး
တပညျ့တျောတို့ မစားပဲ ဘုရားရှငျကိုသာ လှူဒါနျးပါတယျဘုရား။ ကောငျးလိုကျတာ ဒကာမကွီးရယျ ။ဦးဇငျးတို့လညျး လှိုကျလှိုကျလှဲလှဲ သာဓုချေါပါတယျ ။ အငျး ဒကာမကွီးရဲ့ ဒီလိုမြိုး အားကွီးတဲ့သဒ်ဓါတရားကွောငျ့ နတျပွညျမှာ ကွိုပွီး ဗိမာနျပေါကျနတောကိုး
ဒါနဲ့ ဦးဇငျးကမေးတယျ ခုလိုမြိုး ဘုရားရှငျကို ဆကျကပျ လှူဒါနျးခဲ့တာ ဘယျလောကျ မြားကွာပွီလဲ ဒကာမကွီး မှနျလှပါဘုရား သမီးလေးတဈသကျ အနှဈနှဈဆယျ တိုငျခဲ့ပါပွီ ဘုရားတဲ့။ ဒီလိုဆို ဒကာမကွီးရဲ့ ကွီးမားလှတဲ့ကုသိုလျကို ဦးဇငျးတို့ နှဈပါးကိုလညျး အမြှပေးဝပေါ ဒကာမကွီးတဲ့။
ဦးဇငျး သာဓုချေါဆိုပါရစေ ဆိုပွီး…အရှငျဘုရား တပညျ့တျောမသညျ ဘုရားရှငျအား ရညျမှနျး၍ နစေ့ဉျဝတျပွုမပွတျ အာရုဏျဆှမျးနဲ့ နဆှေ့မျးမြား ဆပျကပျလှူဒါနျးရသော ကောငျးမှုကုသိုလျ အစုစုတို့ကို အရှငျဘုရားတို့နှငျ့တကှ သုံးဆယျ့တဈဘုံသား အားလုံးတို့အား အမြှ အမြှ အမြှပေးဝငှေပါကုနျ၏။
အားလုံး အမြှ အမြှ အမြှ ယူတျောမူကွပါကုနျလော့ (ပွနျလညျမြှဝေ ဓမ်မဒါန ပွုပါသညျ)
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ ယခုပြောပြပေးမယ့် အကြောင်းအရာလေးကတော့ အရမ်းကိုမှ ထူးခြားပြီး အံ့သြဖွယ်ကောင်းလှတဲ့ အဖွားတစ်ယောက်ရဲ့ ကုသိုလ်ထူး အကြောင်းလေးပါ။ ဒီအကြောင်းရင်းရဲ့ အစမှာတော့ ပဲခူးတိုင်း ညောင်လေးပင်မြို့ရဲ့ ဆေးရုံပေါ်မှာ
သက်တော်( ၈၉ )နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဆရာတော်ကြီး ဦးဇာဂရဟာ နာမကျန်းဖြစ်လို့ ဆေးရုံကြီးမှာ ဆေးကုသမှု ခံယူရာ ကနေ တစ်နေ့ မှာတော့ သတိလစ်မေ့မြော သွားခဲ့ပါတော့တယ် ။ ဒါနဲ့ပဲ ဆရာတော်ဟာ အိမ်မက်မက်သလို ဖြစ်နေပြီး “အင်း ငါ ဘယ်ကိုများ ရောက်နေတာပါလိမ့် ။
ဧကန္တ ငါအခု နတ်ပြည်ကို ရောက်နေတယ် ထင်ပါရဲ့ဆိုပြီး ။” သူ့ဗိမာန်နဲ့သူ စောင်းငြှင်း ပတ်သာ တူရိယာတွေ ကခုန် တီးမှုတ် နေလိုက်ကြတာ။ ဒါနဲ့ပဲ ဆရာတော်ဟာ ဗိမာန်ကြီးတစ်ခု တွေ့သွားခဲ့တယ်။ ဟော ဒီ ဗိမာန်ကြီးကလည်း ရွှေရောင်တွေ တလက်လက်နဲ့ ဝင်းထိန်နေပါရောလား။
နတ်ပြည်ဆိုတော့ အမွှေးနံ့သာများ မွှေးကြိုက်လျက် ရှိပြီး နတ်သမီးတွေကလည်း အပြည့်ရှိလို့ နေပါတယ် ။ ဘယ်လို ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ ကြောင့်များပါလိမ့် ငါ မေးမြန်းကြည့်ဦးမှပါပဲ ဆိုပြီး သွားရောက်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ် ။အို အသင် နတ်သမီးတို့
ဤကြီးမားတဲ့ ဗိမာန်ပိုင်ရှင်ကား မည်သူဖြစ်ပါသလဲ ? ” မှန်လှပါဘုရား ဗိမာန်ပိုင်ရှင်က ယခု ရောက်မလာသေးပါ။ လူ့ပြည်မှာပဲ သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေဆဲပါဘုရား။ သက်တော်ပြည့်လို့ နေ့စေ့ကံကုန်တဲ့အချိန်မှ ရောက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် တပည့်တော်မတို့လည်း အလွန်ပျင်းလှပါသည်ဘုရား။
အရှင်ဘုရား လူ့ပြည်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ ဤဗိမာန်ပိုင်ရှင်ကို တပည့်တော်မတို့ စောင့်မျှော်နေကြောင်း ပြောကြားပေးတော်မူပါဘုရား ” ဆိုပြီး နတ်သမီးတို့ဟာ ဆရာတော်ဘုရားကို လျှောက်တော်မူလိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ဆရာတော်ဘုရားက ” ကောင်းပါပြီ ဒကာမတို့။ ဗိမာန်ပိုင်ရှင်ကို ဆရာတော် ပြောကြားပေးပါ့မယ်။
ဤဗိမာန်ပိုင်ရှင်ရဲ့ အမည်နာမနဲ့ နေထိုင်ရာနေရပ်ဒေသကိုသာလျှောက်ထားပါလေ ” ဆိုပြီး မိန့်တော်မူလိုက်တယ်။ ” မှန်လှပါ ဘုရား ပဲခူးတိုင်း ဖြူးမြို့နယ် ဝဲကြီးအောက်ခုံရွာက ဒေါ်ကုလားမပါ ဘုရား ” ဆိုပြီး လျှောက်လိုက်ချိန်မှာပဲ ဟော ဆရာတော်ကြီး သတိရလာပြီဟေ့ ဆိုပြီး
ဆေးရုံက ဦးပဉျဇငြးတို့က ပွောလြကွရြှိနခွေိနမြှာပဲ ဆရာတောဘြုရား က မောငပြဉျဇငြးတို့ ငါပှောတာကို စာရှကနြဲ့ သခွော လိုကရြေးထားစမြးကှဲ့ ဆိုပှီး နတသြမီးတှေ ပှောပှလိုကတြဲ့ လိပစြာကို ပှောပှလိုကတြယြ ။ ဆရာတောဘြုရား ကနြွးမာရေးအခှအနေေ ပှနကြောငြးလာတဲ့အတှကကြှောငြ့
ဆေးရုံကနေ ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာ သူမှတ်ထားခိုင်းတဲ့ လိပ်စာအတိုင်း ရဟန်းတော် နှစ်ပါးကို ဗိမာန်ပိုင်ရှင်ဆီကို စေလွှတ်လိုက်ပြီး နတ်သမီးတွေမှာကြားတဲ့အတိုင်း ပြောပြခိုင်းပြီး” ဘာကြောင့် မသေခင်မှာပဲ နတ်ပြည်မှာ ဗိမာန်ပေါက်တဲ့ အထိဘယ်လိုထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့
ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများ ပြုလုပ်သလဲလို့ သေချာမေးမြန်း စုံစမ်းခဲ့ပါ ” ဆိုပြီး ခိုင်းလိုက်ခဲ့ပါတော့တယ် ။ ဒီဝဲကြီးအောက်ခုံရွာမှာက ဒေါ်ကုလားမကို မသိတဲ့လူ မရှိကြ ပေ။ ဒေါ်ကုလားမက မုဆိုးမတစ်ယောက်ပါ။ သမီးလေးတစ်ယောက်နဲ့ အတူနေထိုင်ပြီး ပဲပြုတ်ရောင်းစားပါတယ်တဲ့။
ဒါနဲ့ပဲ ရဟန်းတော်နှစ်ပါးဟာ ယိုင်နဲ့နဲ့ တဲလေးထဲဝင်သွားပြီး ဒေါ်ကုလားမနဲ့တွေ့တဲ့အခါ ဆရာတော်ဘုရား မိန့်ကြားလိုက်တဲ့အတိုင်းအကျိုးအကြောင်း အစုံအလင်ကို ပြောပြပြီး ဒေါ်ကုလားမရဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုထူးတွေကို စတင်ပြီး မေးမြန်းကြပါတော့တယ် ။
အရှင်ဘုရားတို့ တပည့်တော်မက အလွန်ဆင်းရဲပါတယ်ဘုရား။ သူများတွေလိုလည်း ထောင်သောင်းချီပြီး မလှူဒါန်းနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မနက်အာရုဏ်တစ်ကြိမ် နဲ့ နေ့ဆွမ်းတစ်ကြိမ်ကိုတော့ ဘုရားရှင်ကို ဆွမ်းကပ် လှူဒါန်းပါတယ်ဘုရား။ သြော် အဲ့လိုလား။
ဒါနဲ့ ဒကာမကြီးရဲ့ဘုရားရှင်အား ဆွမ်းကပ်လှူဒါန်းပုံကို ဦးဇင်းတို့ သိပါရစေ ဒကာမကြီး။ တင်ပါ့ဘုရား။ ဆွမ်းကပ်လှူဒါန်းပုံကတော့ တပည့်တော်မ မနက် အာရုဏ်တက်တာနဲ့ အသင့်ချက်ပြီးသား ဆွမ်းကို စားပွဲခုံနဲ့ သေချာပြင်ဆင်ပါတယ် ဘုရား။
လက်ဆေးတော်ရေနဲ့ သောက်တော်ရေ လက်သုပ်ပုဝါတွေကိုလည်း အပြည့်အစုံတင်ပြီး သက်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့ ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင် ကြွရောက်ဘုန်းပေးနေသလိုမျိုး အာရုံပြုပြီး ဒါက လက်ဆေးတော်ပါ ဘုရား ဒါက သောက်တော်ရေပါ ဘုရားလို့ လျှောက်ထား ဆက်ကပ်ပြီး အနားကနေ ယပ်ခတ်ပြီး လှူဒါန်းပါတယ် ဘုရား။
သူများတွေလို တပည့်တော်မလည်း အသား ငါးနဲ့ သေချာချက်ပြုတ်ပြီး လှူဒါန်းချင်ပေမယ့် တပည့်တော်မတို့ အခြေအနေနဲ့ မတတ်နိုင်တဲ့အတွက် နေ့စဉ် ပဲပြုတ်နဲ့သာ လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ဘုရား ။တခါတလေတော့ ဈေးရောင်းပြီးပြန်လာတဲ့အခါ ငနုပ်ငဖွဲလေးများကို ဝယ်လာပြီး
တပည့်တော်တို့ မစားပဲ ဘုရားရှင်ကိုသာ လှူဒါန်းပါတယ်ဘုရား။ ကောင်းလိုက်တာ ဒကာမကြီးရယ် ။ဦးဇင်းတို့လည်း လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ သာဓုခေါ်ပါတယ် ။ အင်း ဒကာမကြီးရဲ့ ဒီလိုမျိုး အားကြီးတဲ့သဒ္ဓါတရားကြောင့် နတ်ပြည်မှာ ကြိုပြီး ဗိမာန်ပေါက်နေတာကိုး
ဒါနဲ့ ဦးဇင်းကမေးတယ် ခုလိုမျိုး ဘုရားရှင်ကို ဆက်ကပ် လှူဒါန်းခဲ့တာ ဘယ်လောက် များကြာပြီလဲ ဒကာမကြီး မှန်လှပါဘုရား သမီးလေးတစ်သက် အနှစ်နှစ်ဆယ် တိုင်ခဲ့ပါပြီ ဘုရားတဲ့။ ဒီလိုဆို ဒကာမကြီးရဲ့ ကြီးမားလှတဲ့ကုသိုလ်ကို ဦးဇင်းတို့ နှစ်ပါးကိုလည်း အမျှပေးဝေပါ ဒကာမကြီးတဲ့။
ဦးဇင်း သာဓုခေါ်ဆိုပါရစေ ဆိုပြီး…အရှင်ဘုရား တပည့်တော်မသည် ဘုရားရှင်အား ရည်မှန်း၍ နေ့စဉ်ဝတ်ပြုမပြတ် အာရုဏ်ဆွမ်းနဲ့ နေ့ဆွမ်းများ ဆပ်ကပ်လှူဒါန်းရသော ကောင်းမှုကုသိုလ် အစုစုတို့ကို အရှင်ဘုရားတို့နှင့်တကွ သုံးဆယ့်တစ်ဘုံသား အားလုံးတို့အား အမျှ အမျှ အမျှပေးဝေငှပါကုန်၏။
အားလုံး အမျှ အမျှ အမျှ ယူတော်မူကြပါကုန်လော့ (ပြန်လည်မျှဝေ ဓမ္မဒါန ပြုပါသည်)